SV oo mar kale xildhibaan Maryan Xuseen u sharaxay xubinimo baarlamaan. - NorSom News
Home Nyheter/Warcusub SV oo mar kale xildhibaan Maryan Xuseen u sharaxay xubinimo baarlamaan.
Waxaa xalay fiidkii soo baxay liiska musharaxiinta baarlamaanka ee xisbiga SV, gaar ahaan laantiisa Oslo ay u xusheen inay sanadka danbe uga tartamaan magaalada Oslo. Waxaana booska sadexaad ee liiskaas kusoo baxay Maryan Cabdi Xuseen oo xildhibaanad soomaali ah oo xisbiga SV golahiisa dhexe katirsan.
Booska koowaad(Booska la hubo inuu soo bixi doono) ee liiska musharaxiinta xisbiga SV-Oslo, waxaa kusoo baxay Kari Elisabeth Kaski. Halka Labaad(Booska labaad ee la hubo) uu kusoo baxay Andreas Sjalg Unneland, waxaana booska sadexaad soo gashay Maryan Cabdi Xuseen oo hada ku xigeenka baarlamaan/Boos xajiye baarlamaan(Vara).
Marian Booska labaad-saadaal xooganeyd:
Waxaa sanadkan si aad ah loo saadaaliniyay in Marian Xuseen oo taageero fiican ka heysato gudaha xisbigeeda SV, inay hesho booska labaad ee liiska musharaxiinta Oslo, kaas oo loo arkayo inuu yahay boos la hubo in qofkii la galiyo ay u badantahay inuu baarlamaanka soo galo. Balse codeyn kadib, waxaa Marian booskaas kala baxay Andreas Sjalg Unneland oo ahaa gudoomiyaha ururka dhalinyarada xisbiga SV( Sosialistisk Ungdom). Waxaana in Marian ay booskaas weydo loo badinayaa inay sabab u aheyd in qofka booska koowaad galay ay aheyd qof haweenay ah(Kaski), sidaas darteed ay adagtahay in laanta xisbiga SV ee Oslo, ay labada boos ee ugu horeeyo liiska musharaxiinta Oslo galiyaan labo musharax oo haween ah.
Sida ku xusan waraaqda codtirinta liiska xubnaha musharaxiinta, Marian ayaa cod aqlabiyad ah ku heshay booska sadexaad ee liiska musharaxiinta xisbiga SV Oslo , waxeyna hada heysataa fursad ay markan si toos ah uga mid noqon karto golaha baarlamaanka Norway, hadii doorashada sanadka danbe ay xisbiga SV Oslo ka helaan codad ka badan kuwii sanadkii 2017. Marian ayaa sidoo kale hadii xisbiyada bidixdu ay ku guuleystaan awooda dowlada, heli karto fursad xoogan oo ay uma mid noqoto xubnaha baarlamaanka ama xitaa golaha xukuumada.
Marian oo horey u ahaan jirtay gudoomiyaha ururka ardeyda soomaalida Norway, ayaa sanadkii 2019 noqotay xildhibaanadii ugu horeysay ee asal ahaan soomaali ah oo kamid noqoto golaha baarlamaanka Norway. Waxeyna noqotay xildhibaankii ugu horeeyay ee golaha baarlamaanka Norway lasoo gasho xijaabka oo ah dharka asturka dumarka muslimka ah.
Previous articleNovember ayaa bixinta kaararka aqoonsiga cusub la bilaabi doonaa.
Next articleSweden oo wixii lagu wada qoslaba, hada kaligeed qosleysa.
Keydka NorSom Velg måned desember 2021 (4) november 2021 (63) oktober 2021 (71) september 2021 (80) august 2021 (67) juli 2021 (54) juni 2021 (57) mai 2021 (48) april 2021 (67) mars 2021 (70) februar 2021 (51) januar 2021 (55) desember 2020 (50) november 2020 (67) oktober 2020 (75) september 2020 (54) august 2020 (82) juli 2020 (54) juni 2020 (69) mai 2020 (83) april 2020 (68) mars 2020 (130) februar 2020 (69) januar 2020 (84) desember 2019 (22) november 2019 (71) oktober 2019 (54) september 2019 (50) august 2019 (96) juli 2019 (77) juni 2019 (78) mai 2019 (79) april 2019 (40) mars 2019 (64) februar 2019 (61) januar 2019 (40) desember 2018 (25) november 2018 (52) oktober 2018 (33) september 2018 (44) august 2018 (33) juli 2018 (28) juni 2018 (28) mai 2018 (39) april 2018 (41) mars 2018 (55) februar 2018 (36) januar 2018 (85) desember 2017 (83) november 2017 (105) oktober 2017 (119) september 2017 (112) august 2017 (109) juli 2017 (125) juni 2017 (115) mai 2017 (122) april 2017 (108) mars 2017 (137) februar 2017 (114) januar 2017 (106) desember 2016 (98) november 2016 (101) oktober 2016 (83) september 2016 (44) august 2016 (44) juli 2016 (28) juni 2016 (44) mai 2016 (24) april 2016 (25) mars 2016 (1)